HomeAfricaTaariikhda Ciyaareed Ee Xiddiga Yaya Toure
Yaya Toure ayaa laba jeer waxaa loo caleema saarey taajka ciyaaryahanka Kubadda Cagta sanadka ee BBC-da, isagoo afar jeerna uu ku guuleystay magacaabista xiriirka kubadda ee Africa ee Ciyaaryahanka Kubadda Cagta Africa ee sanadka – sidaa darteed ma ahan mid filan waa ku ah ciyaaryahanka, inuu mar kale kasoo dhex muuqdo liiska aan soo gudbinay.
Wuxuu saftay oo kaliya saddex iyo labaatan kulan sanadkan 2016-ka- ha yeeshee soo magacaabistiisa ayaa muujineysa sida uu sumcad uga dhax leehayciyaaraha Afrika.
Xitaa haddii kulamada uu safto la xadiday, raadkiisa ayaa mar kale la qiyaasi karaa inuu soo laba kacleeyey.
Bishii February, wuxuu u qaaday koobka Horyaalka Ingiriiska kooxda Manchester City – isagoo dhaliyay gool ku laad muhiim ahaa oo ay ku garaaceen ciyaartii kama danbeysta aheyd kooxa Liverpool.
Sidoo kale, naadigiisa wuxuu ka caawiyey iney gaaraan afar dhamaadka koobka Horyaalka Yurub, halka uu ku dhamaadey Horyaalka Ingiriiska iyagoo ku jira kaalinta afraad, si uu u xaqiijiyo mar kale kooxdu iney gasho kaalin ay kaga qeyb qaadan karto ciyaaraha ka dhacaya qaaradda.
Guushaas ayaa u aheyd Toure midii uu ku go’aan sadey inuu sii joogo, uuna u dagaalamayo booskiisa kooxda City, iyadoo uu yimid tababaraha cusub ee Pep Guardiola – kaasoo maamulayay kooxda Barcelona markii uu ciyaaryahankan u dhashay Ivory Coast uu ka soo tagay.
Image captionYaya Toure
Laakiin markii faalo uu bixiyey wakiilkii Toure, Dimitri Seluk, kaasoo ku andacooday in ciyaaryahanka la ceebeeyey markii laga reebay liiska cayaartoyda u safaneyso kooxda xagaagan. Hadalkaasi ayaa ka careysiiyay Guardiola, waana laga mamnuucay Toure inuu mar dambe kooxda u safto illaa uu Seluk bixiyo raali gelin. Inkastoo aysan taasi dhicin, Toure qudhiisa ayaa raali gelin bixiyey.
Inkastoo Toure uusan lahayn ikhtiyaar uu ku kala doorto inuu ka maqnaado kooxda uu xidiga u yahay go’aan kiisa ah soo ceshada xiliyadiisii xirfadda kubadda caalaminimada 2016-ka waxey aheyd dhammaan hawl uu kaligiis qabtay.
Waxey ku qaadatey inuu go’aan kaasi gaaro sanad iyo bar, ka gadaal markii dalalka ka qeyb galayey koobkii Qaramada Africa ee 2015-ka ee ka dhacey Guinea, uu soo wajahay guul daro, ku keentay cadaadis ah inuu baaqi kusii ahaado kooxdiisa Marooriyada.
Tababarihiisii hore ee xulka qaranka Francois Zahoui ayaa kamid ahaa kuwa isku dayey iney ka dhaadhiciyaan inuu sii wato hawshiisa, ee ah kusoo bixida tartanka koobka Qaramada Afrika ee sanadka 2017-ka, oo ka dhacaya Gabon, iyadoo uu ku xigo tartanka kubadda cagta ee adduunka, kaasoo isna ka qabsoomi doona dalka Ruushka.
Ma ahan wax addag ineynu aragno sababta
Muuqaalka in muda ah iyo dhalinta tiro goolal muhiim ah oo uu magac ku kasbadey, Toure wuxuu udub dhaxaad u ahaa guulaha ay gaarayeen kooxda Ivory Coast, halka loo caleema saarey xirfaddiisa caalamiga ah, isagoo ku hoggaamiyey wadada dheer ee la sugayey oo ah qaadista koobta Qaramada Africa sanadkii 2015-kii.
Sidoo kale wuxuu naqshadeeyey kulan kasta oo ay kooxda Ivory Coast ay ciyaartay, kuwaasoo ay ka gaareen guulo is xig xigay oo loo galey is reeb reebka kama danbeysta ah ee Koobka Adduunka.
Ha yeeshee 2016-kii wuxuu ahaa sanadkii uu xaqiiq sadey inuu yahay xiligii uu hawlgab ka noqon lahaa shaqada ciyaaraha caalamiga ah – inkastoo uu qirtay inaanu aheyn mid sahlan go’aanka kama danbeysta ah
“Qoritaanka qoraalkan yar wuxuu ahaa dhabtii mid aad iigu adag intii aan jirey nolosheyda,” ayuu ku yiri qoraal uu soo saarey bishii September.
Laakiin wuu cadeeyey inaanu haatan ku fikireyn inuu lumiyo aqoonta iyo awoodda uu u leeyahay ciyaaraha Kubadda Cagta.
“Dhabtii waxay haatan tahay da’deyda 33 sano jir, xoogga uu leeyahay tababarka iyo baaxadda kulamada ma ahan sabahaha aan u qaadanayo go’aan kan,” ayuu yidhi.
Liverpool Oo Ku Durdurisay Stoke, Kaalinta Labaadna Kala Baxday City
All Highlights: Crystal Palace 0-0 Manchester City
31/12/2017 Abdiwahab Ahmed